RecalBox: Definitive Retro Video खेल प्लेटफार्म | नि: शुल्क हार्डवेयर
RecalBox: अन्तिम रेट्रो खेल प्लेटफर्म
यदि तपाईं आफ्नै मल्टिमेडिया र मनोरन्जन केन्द्र स्थापित गर्न पूरा प्रणाली खोज्दै हुनुहुन्छ भने RecalBox निश्चित परियोजना तपाईंलाई आवश्यक छ। एउटा प्रणाली जुन तपाईं आफ्नो बोर्डमा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ रास्पबेरी Pi र एक सस्तो उपकरण छ जुनसँग तपाईंको बैठक कोठामा मनोरञ्जनको लामो घण्टा खर्च गर्न वा निजी मनोरन्जन कोठा.
यदि तपाईं Hwlibre पढ्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई त्यो पहिले नै थाहा हुनुपर्दछ त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन् रेट्रो गेमि forका लागि, बाट केहि कम्पोनेन्टहरू तपाईको आर्केड मेसिन भेला गर्न घरेलु, धेरै अन्य रीकलबक्स नै विकल्प तपाइँको एसबीसी बोर्ड को लागी। सबै कुरा निन्टेन्डो, अटारी, र अधिकबाट रेट्रो मेसिनहरूको ती क्लासिक भिडियो खेलहरू पुन: प्राप्ति गर्ने हो। प्रामाणिक रत्नहरू जुन गेमरहरूलाई आकर्षित गर्न रोक्दैन ...
1 RecalBox के हो?
1.1 RecalBox .6.0.०
2 रास्पबेरी पाईमा रीकलबक्स स्थापना गर्नुहोस्
2.2 तपाईको रास्पबेरी पाईमा रीकलबक्स स्थापना गर्नुहोस्
2.3 RecalBox कन्फिगर गर्नुहोस्
RecalBox के हो?
RecalBox एक निःशुल्क र खुला स्रोत प्रणाली हो जुन तपाईंलाई रेट्रो कम्प्युटर र कन्सोलहरूको ठूलो संख्या अनुकरण गर्न अनुमति दिन्छ। यी प्लेटफर्महरूमा पौराणिक भिडियो गेमहरूको एक भीड छ जुन तपाईं अब यो प्लेटफर्मलाई धन्यवाद relive गर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, रीकलबक्सलाई अन्य वैकल्पिक प्रणालीबाट भिन्न गर्न सकिन्छ किनकि यसले मल्टिमेडिया कार्यलाई पनि अनुमति दिन्छ।
धन्यवाद मल्टिमेडियाका लागि अतिरिक्त प्याकेजहरू तपाईं एक retrogaming स्टेशन को साथ आफ्नो महान मिडियासेन्टर सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ। सबै एक मा, केन्द्रीय र सजीलो। बहु प्रणालीहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छैन र एक वा अन्यसँग NOOBS मार्फत बुट गर्नुपर्दैन।
पूर्ण हुनुको साथै, यो पनि हो लगातार अपडेट गर्नुहोस् यसको विकासकर्ताहरूको सक्रिय समुदायलाई धन्यवाद। तसर्थ, तपाईंसँग बगहरूका लागि समाधानहरू, र निश्चित सुधारहरू छन् जुन निश्चित रूपमा सराहना गरिन्छ।
ती सबैको लागि, RecalBox मानिन्छ सबै भन्दा राम्रो प्लेटफर्म मध्ये एक मनोरन्जनका लागि ...
डाउनलोड गर्न - RecalBox
यस प्रोजेक्टमा अगाडि बढ्ने महान चरणहरू मध्ये एक रीकलबक्स .6.0.० संस्करणको आगमन थियो। यो मानिन्छ विकासमा ठूलो परिवर्तन RecalBox को, र त्यसले हालको रिलिजहरूको लागि आधार संस्करणको रूपमा काम गरेको छ जस्तै स्थिर संस्करण RecalBox 6.1.1 जुन यो लेख लेख्ने समयमा सब भन्दा पछिल्लो हो।
रिकलबक्स ओएस मूलतया एक हो GNU / Linux वितरण मैले पहिले नै उल्लेख गरे जस्तो मल्टिमेडिया र रेटग्रामिंगको लागि अनुकूलित। यो शुरूमा रास्पबेरी पाईमा प्रयोग गर्नका लागि प्रोग्राम गरिएको थियो, ओड्रोइड र एक्स 86. systems प्रणालीहरू 4.1..१ मा पनि पुग्यो, र कन्टेनरहरू पनि।
फ्रान्सेली मूल को परियोजना को यो संस्करण x.x मा यसको एक अधिकतम पुगेको छ, जहाँ यो पहिले नै piFBA र रेट्रोआर्च, साथ साथै EmulationStation6 मार्फत सय कन्सोल र प्रणाली अनुकरण गर्न सक्षम थियो।
समावेश गर्दछ शक्तिशाली कोडी मल्टिमेडिया को लागी, यसले सबै सुविधाहरू देखाउँदछ। योसँग अधिक सुविधाजनक नेभिगेशन र नियन्त्रणको लागि यसको ग्राफिकल ईन्टरफेस पनि थियो, र यसको राम्रो कामले रास्पबेरी पी फाउन्डेशनले यसलाई समावेशका लागि विचार गरेको छ। NOOBS र अन्य विकासकर्ताहरूले यसलाई फोर्कको आधारको रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुहोस् Batocera.linux (२०१ 2016).
यदि तपाईं बारेमा सोच्नुहोस् भिडियो खेलहरूको साथ अनुकूलता, त्यो हो, कुन प्लेटफर्महरूमा यसले सबै मिल्दो भिडियो खेलहरू चलाउन अनुकरण गर्न सक्दछ, त्यसोभए तपाईंलाई पूर्ण सूची थाहा हुनुपर्दछ जुन रीकलबक्स सुसज्जित छ:
र अधिक प्रणालीहरू ...
रास्पबेरी पाईमा रीकलबक्स स्थापना गर्नुहोस्
यसको लागि तपाइँको पीसी प्रयोग नगरी तपाइँको रीकलबक्सको मजा लिनको लागि, तपाइँ यसलाई रास्पबेरी पाई जस्तो एसबीसी बोर्डसँग सस्तोमा गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, केहि दसौं यूरोको लागि तपाईं सक्नुहुन्छ पूरा प्रणाली छ तपाईंको मनोरञ्जन र मल्टिमेडिया केन्द्र माउन्ट गर्न, यो प्लेटलाई तपाईंको बैठक कोठामा टिभीमा जडान गर्दै ...
के तपाईंले किन्नु पर्छ तपाईंको आर्केड सेट अप गर्न (यदि तपाईंसँग पहिल्यै यो छैन भने) निम्न छ:
रास्पबेरी Pi3(दुर्भाग्यवस, वर्तमान संस्करणहरूले पाई4का लागि समर्थन थपेको छैन)
मेमोरी कार्ड microSD कम्तिमा १GB जीबी
पावर एडप्टर 2.5A र 5v पावरको लागि USB मार्फत।
HDMI केबल यसलाई टिभी वा स्क्रिनमा जडान गर्न।
अनुकूल भिडियो गेमहरू वा केहि लागि नियंत्रक retro अवस्थित छ.
रास्पबेरी पाई केस वा आवास (वैकल्पिक)।
खैर, तिनीहरूले पनि बेच्छन् पूर्ण किटहरू कोमो Aukru को पूर्व एउटा बक्स, heatsink र तपाइँको पाई को लागी शक्ति एडाप्टर गर्न ...
तपाईको रास्पबेरी पाईमा रीकलबक्स स्थापना गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईसँग सबै सामग्री छ, अर्को चरण हो RecalBox स्थापना गर्नुहोस् तपाईंको रास्पबेरी पाई बोर्डमा यी साधारण चरणहरू अनुसरण गरेर:
रिकलबक्स डाउनलोड गर्नुहोस् बाट आधिकारिक वेबसाइट। तपाईंको प्लेट मोडेलको लागि उपयुक्त छवि चयन गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि .img .zip मा संकुचित भयो तपाईले यसलाई अनपिप गर्नुपर्नेछ।
अब तपाईंले प्रयोग गर्नु पर्छ ईथर माइक्रोएसडी फ्ल्यास गर्न र यसमा RecalBox स्थापना गर्नुहोस्। तपाईं यी पालन गर्न सक्नुहुन्छ चरणहरू जुन मैले तपाईंलाई अर्को लेखमा देखायो.
अब, तपाइँको रास्पबेरी पाईको स्लटमा माइक्रोएसडी कार्ड घुसाउनुहोस् र, यदि तपाइँ सबै ताराहरू जडान हुनुभएको छ भने, तपाइँले बुटि start सुरू गर्न खोल्न सक्नुहुन्छ ...
त्यो को रूप मा सरल!
RecalBox कन्फिगर गर्नुहोस्
बुट पछि कन्फिगरेसन लामो लाग्दैन। यो प्रणाली सेटिंग्सबाट एकदम सरल छ। साथै, यदि तपाईंसँग छ भने एक USB नियंत्रक, तपाईं यसलाई जडान गर्न सक्नुहुनेछ र यो सीधा काम सुरु हुन्छ यदि यो उपयुक्त छ। वायरलेस भइरहेको अवस्थामा तपाईले यसको कनेक्शनको लागि ब्लुटुथ डोंगल प्रयोग गर्नु पर्छ र यसलाई पहिचान गर्न पर्खनु पर्छ ... योसँग धेरै रहस्य छैन।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने अन्य विवरणहरू समायोजन राख्नुहोस् कोडिबाट, वा रीकलबक्स प्रणालीबाट नै, तपाईं यसलाई अनुकूलन गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तथापि तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरू चाहनुहुन्छ भने ...
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंको भिडियो खेलहरूको ROM राख्नुहोस्, मैले पहिले नै केहि व्याख्या गरें यो अन्य लेखमा। मँ आशा गर्छु तपाई रमाईलो गर्नुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » रास्पबेरी Pi » RecalBox: अन्तिम रेट्रो खेल प्लेटफर्म
ADS1115: A আরडिनोका लागि एनालग-डिजिटल कन्भर्टर
Batocera: retrogaming को लागी अपरेटिंग प्रणाली